ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်က ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်တရားဝင်စီးနင်းခွင့်ရရှိရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုချိန်မှာ ပြန်လည်ပြီးတော့ စီးနင်းခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုလာကြတာဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက် တောင်းဆိုသူတွေလည်းရှိသလို ကန့်ကွက်သူတွေလည်း ရှိကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဘယ်အရာမှာဆို ဆိုးတာတွေလည်းရှိသလို ကောင်းတာတွေလည်း ရှိတတ်ကြတာ သဘာဝပါ။
အခု ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ …? ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ …? ဒါတွေကို သေချာချိန်ဆပြီး ဆိုးကျိုးထက်ကောင်းကျိုးက ပိုများမလား ..? ဒါမှမဟုတ် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးက ပိုများနိုင်မလား ….? ကို သေချာဆင်ခြင်ပြီး ဆိုင်ကယ်တွေကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ စီးခွင့်ပေးသင့်မပေးသင့်ကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုး/ကောင်းတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပြလိုက်ပါရစေ။
တကယ်လို့များ ဆိုင်ကယ်တွေသာ စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို အရင်ရေးချင်တယ်။ တကယ်လို့များပေါ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာသာ ဆိုင်ကယ်တွေ စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့် ဆိုးကျိုးတွေကတော့...
၄။ Public Transportion ဈေးကွက်စနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်တာ
၅။ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားဖို့နေရာအခက်အခဲ ရှိနိုင်တာ တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နံပတ် တစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာတောင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရဲ့ ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုဟာ ပြဿနာတစ်ရပ်လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ ဆိုင်ကယ်တွေသာ ထပ်ပြီးစီးခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုပြီး ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကားစီးတဲ့သူတွေအတွက် ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုကို ပိုမိုခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါပဲ။
ဒါကလည်း ထည့်တွက်ရမယ့် ပြဿနာတစ်ခုပါ။ လက်ရှိမှာတောင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လေထုက ညစ်ညမ်းအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ဆိုင်ကယ်တွေပါ ထပ်တိုးလာမယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကထွက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့နဲ့အင်ဂျင်အပူချိန် အရမ်းကြီးမများဘူးဆိုပေမဲ့ ဆိုင်ကယ်ပေါင်းထောင်ချီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ လမ်းမပေါ်မှာ ယာဉ်ပိုများလာရင် မတော်တဆမှုပိုများလာတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အထူးတလည်ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒါကတော့ အကြီးမားဆုံးပြဿနာလို့ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ Public Transportion တွေအဖြစ် YBS ၊ တက်စီ၊ ဆိုက်ကား တွေဟာ အဓိက နေရာက ပြေးဆွဲနေကြတယ်။ တကယ်လို့များ ဆိုင်ကယ်တွေကို စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဘတ်စ်ကားစီးသူတွေ၊ တက်စီစီးသူတွေ၊ ဆိုက်ကားစီးသူတွေ နည်းပါးလာမှာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် လူပေါင်းများစွာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်တာမျိုးနဲ့လည်း ကြုံရနိုင်သလို Public Transportionနဲ့ စီးပွားရှာနေသူတွေအနေနဲ့လည်း စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်တွေခွင့်ပြုပေးလိုက်ရင် ဆိုင်ကယ်တက်စီ‌တွေလည်း တစ်ပါတည်းပါဝင်လာဖို့ရှိနေတာကြောင့် Public Transportion ရဲ့ ဈေးကွက်စနစ်ကို ထိခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားဖို့နေရာအခက်အခဲ ရှိနိုင်တာ
လက်ရှိအခြေအနေမှာတောင် ကားရပ်နားဖို့ နေရာအခက်အခဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားဖို့အတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင် နေရာမလောက်ငမှုတွေ၊ ပါကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သိမ်ကြီးဈေးလို၊ ယုဇနပလာဇာလို၊ မင်္ဂလာဈေးလို နေရာတွေမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ ရပ်နားဖို့အတွက် ကားတွေရပ်နားမယ့်နေရာတွေကို အဓိက ခြိမ်းခြောက်လာနိင်တာက ပြဿနာတစ်ရပ်လိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆိုးကျိုးတွေ ရေးပြီးပြီဆိုတော့ ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ရေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေပေးစီးလိုက်တာဟာ ဆိုးကျိုးတွေချည်းပဲ ဖြစ်ပေါ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေသာ အမှန်တကယ်ပေးစီးလိုက်ရင် ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ..
၃။ လုပ်အားစွမ်းအင်ကို ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း
၄။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုပုံစံရရှိနိုင်ခြင်း
၅။ မြို့ပြဧရိယာပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်ခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့ မြို့ထဲကို နေ့စဉ် လိုင်းကားတိုးစီးနေရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ နေ့စားသမားတွေအတွက်လို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လိုင်းကား တစ်ဆင့်ထဲနဲ့ မြို့ထဲကို ရောက်တဲ့သူအတွက် တစ်ရက်ကို အသွားအပြန် ၆၀၀ လောက် နေ့စဉ်ကုန်ကျမှာပါ။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ နေ့စဉ်အသွားအပြန်အတွက် ၃ရက်ကို ၁,၀၀၀လောက်ပဲ ကုန်ကျမှာပါ။ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းအပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ထက်ဝက်လောက်ထိ သက်သာနိုင်ပါတယ်။
မြို့တွင်းတစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ကားတစ်ခုပဲ ရွေးချယ်စရာရှိတဲ့အခြေအနေကနေ ဆိုင်ကယ်ပါရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာတာပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ မြို့တွင်းထဲမှာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို အချိန်အများပြီးပေးပြီး သွားနေရတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သာဆိုရင် ကားတွေထက်တော့ ပိုမိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိဖို့များတာကြောင့် တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကာယ အလျင်လိုနေသူတွေအတွက် ဆိုင်ကယ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
ကျနော်တို့တွေဟာ နေ့စဉ် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အချိန် ၂နာရီလောက် ဖြုန်းတီးနေကြရပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဆိုင်ကယ်တွေကို စီးနင်းခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေလျှော့နိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အချိန်ကုန်လူပန်းခြင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းနဲ့အများ တိုးတက်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
လက်တစ်ဆုပ်စာ ပစ္စည်းလေးအတွက်နဲ့ တက်စီကိုငှားပြီး သွားနေရတာ မြို့ထဲက စတိုင်လိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်လို့များဆိုင်ကယ်တွေကိုသာ ခွင့်ပြုလိုက်ရင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ဆိုင်ကယ်တွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလာမှာဖြစ်သလို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုပုံစံကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဒါကတော့ နည်းနည်းရှင်းပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လက်ရှိမှာ ရန်ကုန်မြို့ထဲက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ရုံးခန်းတွေဟာ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေ၊ လမ်းမတန်းနဲ့နီးတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ အဓိက ဖွင့်နေကြရတယ်။ တကယ်လို့များ မြို့ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်တွေကိုသာ ပေးစီးလိုက်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ရုံးခန်းတွေအနေနဲ့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ မြို့ထဲက နေရာတွေမှာ သွားဖွင့်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ လှည်းကူး၊ ခရမ်း၊ ထောက်ကြံ့၊ မှော်ဘီ တို့လို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အစွန်အဖျားကလူတွေအတွက်လည်း ဘယ်နေရာမှာမဆို အလုပ်လာဆင်းဖို့ အဆင်ပြေသွားနိုင်သလို အလုပ်သမားတွေရဲ့ သွားလာရေးတွေ၊ ညအိုဗာတိုင်ဆင်းတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကို အထူးတလည်ထည့်တွက်စရာမလိုတော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မြို့ပြဧရိယာကို ပိုမိုကျယ်ဝန်းသွားစေနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ အင်းစိန်က ရုံးခန်းဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ကို သန်လျင်၊ ကျောက်တန်း၊ သုံးခွတို့က လူတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူအလုပ်လာဆင်းနိုင်မှာဖြစ်သလို အိမ်ပြန်ချိန်တွေမှာလည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့် ဘယ်အချိန်မဆို အိမ်ပြန်ဖို့အဆင်ပြေသွားမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါဟာ အလုပ်သမားတွေအတွက် နေရာအခက်အခဲကြောင့် လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ရတဲ့အခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှာဖြစ်သလို၊ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်သမားခန့်တဲ့နေရာမှာ ရန်ကုန်ရဲ့ ဘယ်မြို့နယ်ကအလုပ်သမားကိုဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူခန့်အပ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်။
လက်ရှိသုံးသပ်တင်ပြလိုက်တဲ့ မြို့ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ စီးနင်းခွင့်ပြုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးနဲ့ ကောင်းကျိုးတွေထဲမှာ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ အချက်တွေကို ရွေးထုတ်တင်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုအဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းတွေကို ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်တွေကို စီးနင်းခွင့်ပြုမပြု စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ စီးနင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း တင်းကြပ်တဲ့ဥပဒေတွေ၊ စည်းကမ်းချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုပါ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ စီးခွင့်ရရေး၊ မရရေးထက် ဆိုင်ကယ်တွေကို စီးနင်းခွင့်ပြုလိုက်ရင် ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေ၊ ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းခွင့်မပြုထားသည့် မြို့နယ်များတွင် စီးနင်းသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်